Wednesday July 22, 2020 - 09:10:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Melleteriga dowladda Uganda ayaa gelinkii dambe ee maalintii Talaadada ku dhawaaqay in diyaarado dagaal uu uga qeyb qaadan doono duullaanka ay shisheeyuhu ku qaadeen dalka Soomaaliya halkaas oo lagu miciya siibay kumanaan ciidamo jinsiyado kala duwan
Richard Karemire oo ah afhayeenka ciidamada Yugaandha ee loo yaqaan UPDF ayaa warbaahinta u sheegay in ay diyaariyeen tiro diyaaradaha oo ay ku taageeri doonaan ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya.
Wuxuu carabaabay in qorshahan oo in mudda ah socday ay gacan ka geysanayaan dowladaha iyo Ururada maalgeliya duullaanka ay ciidamada shisheeye ku qaadeen Soomaaliya sida Q.Midoobay iyo Midowga Yurub.
Muhiimadda ay qabanayaan diyaaradaha Uganda ayuu ku sheegay in ay sahayda udaabuli doonaan dhammaan ciidamada AMISOM ee ku kala firirsan gobollada Soomaaliya islamarkaana ay ciidamada dalkiisa ka socda ka gacansiin doonaan ladagaallanka Al Shabaab sida uu hadalka udhigay.
Saldhigga xagga cirka ah oo kuyaal duleedka magaalada Kampala ayaa lagusoo bandhigay qaar kamida diyaaradahan oo nuucoodu yahay helocopter waxaana qeybta dambe uga buufsan calaamadda AF.
"Diyaaradahan aan ku faafinayso Soomaaliya waxay awood siin doonaan ciidamada UPDF ee dagaalka kula jira Argagaxisada Al Shabaab waxaa kale oo ay saadka iyo sahayda muhiimka ah udaabuli doonaan dhammaan ciidamada AMISOM" sidaas waxaa yiri Afhayeenka ciidanka Uganda.
Mashruucan ayay dowladda Uganda suuq geyn usameysay sanaddii 2012 iyadoo dhaqaale doon ah oo qarash uga rabtay waxa loogu yeero Q.Midoobay balse arrinkaas guuldarro weyn ayuu lakulmay markii diyaaradahaas ay ku burbureen dhul buuralay ah oo kuyaal dalka Kenya.
Jeneraal Charles Lwanga Lutaaya oo ah taliyaha ciidanka cirka Uganda ayaa ku eedeeyay 'Beesha caalamka in 8 sano kadib musiibadii kasoo gaartay burburkii diyaaradihii ku wajahnaa Soomaaliya aan wali lasiin wax magdhow ah.
Kumanaan katirsan ciidamada Uganda oo qeyb ka ah soo duulayaasha AMISOM ayaa xaalad go'doon u eg lagu geliyay degmooyin katirsan Sh/Hoose waxaana ciidamadaas lagu quudiyaa xagga cirka oo kaliya.
Al Shabaab ayaa ku guuleysatay in ciidamada soo duulayaasha ah ay ka jarato waddooyinkii ay sahayda isugu gudbinayeen waxayna ciidamadan gabeen marxaladdii weerarka iyagoo kusoo aruuray difaacu nafsi.